दै’व पनि कति निस्टुरी !! संक्रमित बुवाको नि धन पछि कि’रिया बसेका छोराको पनि नि’धन – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/दै’व पनि कति निस्टुरी !! संक्रमित बुवाको नि धन पछि कि’रिया बसेका छोराको पनि नि’धन
पुरेत आउन नमान्दा को रोनावाट नि धन भएकाको परिवारले का ज कि रिया गर्न पाएका छैनन्। पश्चिम नवलपरासी रामग्राम नगरपालिका–३ परासीका ५२ वर्षीय पुरुषको गत असोज ८ गते को रोना विशेष अ स्पताल बुटवलमा नि धन भएको थियो। परिवारले घरमा पुरेत जान डराएपछि कि रिया गर्न नपाएको बताएका हुन्।
काठमाडौंमा बस्दै आएका बाबुको नि धन भएपछि परिवारसहित घरमा कि रिया गर्न आएका थिए। बाबुको किरि या सकेको १० दिन न बित्दै उनको पनि को रोनावाट नि धन भएको थियो । स्वास प्रश्वासको समस्या देखिएपछि उनलाई बुटवल को रोना अ स्पताल पठाइएको थियो। नि धनपछि उनको शव बुटवलमै व्यवस्थापन गरिएको थियो।
उक्त पुरूषको मृ त्युपछि ७२ वर्षीया आमा र श्रीमतीसहित परिवारका ५ जनामा को रोना पो’जिटिभ देखिएको छ। छोरासहित अन्य ३ जनाको रि पोर्ट भने ने गेटिभ आएको छ। सं’क्रमित भएकाहरु परासीस्थित आ इसोलेसन सेन्टरमा छन्। घरमा रहेका छोराले कि रि याको तयारी गरे पनि पु रेत आउन नमानेपछि रोकिएको मृ त कका भाइले बताए। होम आ इसोलेसनमा बस्न पाइने भए पनि ठाउँ नभएकाले वृद्धा आमालाई लिएर नगरपालिकाको आइ सोलेसनमा बस्नु परेको उनले बताए।
‘भाउजू आइ सोलेसनमा हुनुहुन्छ। मृ त्यु संस्कार अनुसार छोरा भएकाले पु रेत नै राखेर कि रिया गर्ने हो। पुरेत नै नआएपछि कसरी मृ त्यु संस्कारको काम गर्नु ?’, विगतमा पुजारीको कामसमेत गर्दै आएका अधिकारीले आफ्नो संस्कार सुनाउँदै भने।
घरमा बसेका परिवारमा सं क्रमित नभए पनि घरमा जाँदा रोग सर्ने मा नसिक ड रले पुरेत जान नमानेको उनको बुझाइ छ। ‘तपाईंहरु सञ्चो भएर आउनुहोस् समय अनुकुल भएपछि दसैंपश्चात कि रियाको काम गरौंला भनेर पुरेतले भनेका छन् ’, उनले भने। आ इसोलेनको १४ दिन बसाइपछि पी’सीआर परीक्षण नगरी पठाउन भनेकाले आफ्नै खर्चमा परीक्षण गरेर घर जाने सोच अधिकारी परिवारको छ। यो समाचार अन्नपुर्णा पोष्टमा हरि शर्माले लेखेका छन् ।
चितवन– चितवनमा एक को रोना सं क्रमितको मृ त्यु भएको छ । भरतपुर अस्पतालमा उप चाररत कालिका नगरपालिका–७ जुटपानीका ६२ वर्षीय पुरुषको आज बिहान मृ त्यु भएको अ स्पतालका सू चना अधिकारी लीलाधर पौडेलले जानकारी दिए ।
असोज १६ गते को रोना सं क्रमणसहित उनी भरतपुर अस्पतालको को भिड आ इसीयूमा भर्ना भएका थिए । उनमा खोकी र स्वा सप्रश्वासको समस्या देखिएको अस्पतालले जनाएको छ । यससँगै को रोनाका कारण चितवनका मात्रै २४ ज’नाको मृ त्यु भएको छ ।
को रोना भा इरसलाई मध्य नजर राख्दै भरतपुर का रागारमा उच्च स’तर्कता अपनाइएको छ । क्षम’ताभन्दा दोब्बर बढी कै दी तथा थु नुवा रहेको र यहाँ को रोना भाइर सको सं’क्रमण हुन नदिन उच्च सतर्कता अपनाएको हो । चैत ११ गते सरकारले ल’कडाउन घो षणा गरेसँगै का रागारले कै दी तथा थु नुवाका आफन्तलाई भे टघाट ब’न्द गरेको छ ।
कार्यालयका प्रमुख कमलप्रसाद काफ्लेले कै दी तथा थु’नुवाका लागि आफन्तले ल्याएको सर–सामान पनि फिर्ता पठाइएको बताए ।
“आफन्तले ल्याएको पैसालाई स्या नि’टाइज गरी पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाएका छौँ”, उनले भने, “कै’दी तथा थु’नुवाबीच सामाजिक दू’री कायम गराउन गा’ह्रो छ । बाहिराबाटै चेन ब्रेक गर्न सा’वधानी मिलाएका छौँ ।”
प्रमुख काफ्लेका अनुसार अन्य कुनै रो’गको सं’क्रमण हुन नदिन माछा, मासु खान पनि बन्द गरिएको छ । कारा’गारभित्रकालाई हालसम्म को रोना देखिएको छैन । कै दी तथा थु नुवाको खानपानामा ध्यान दिइएकाले जटिल स्वास्थ्य समस्या नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
नयाँ आउने ब न्दीलाई छुट्टै ब्ल’कमा दुई हप्ता अलग राख्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए । उनका अनुसार सम्भावित जो खिमलाई हेरेर आ इसोलेसन ब्ल’कसमेत बनाउने तयारी छ । करिब ३० शय्याको आ इसोलेस नकक्ष बनाउनेबारे छलफल भइरहेको बताए ।“अहिलेसम्म भित्र को रोना सं’क्रमण भेटिएको छैन र हामी उच्च सतर्क छौँ”, उनले भने, “बे लाबखत केहीको पि सीआर प रीक्षण गराएका छौँ, संक्र मण देखिहाले फैलिन नदिन आवश्यक पू र्वतयारी गरिसकेका छौँ ।”
का रागार कार्यालय चितवनमा २०० बढी कै’दीब’न्दीले नियमित औष धि लिने गरेका छन् । नियमित औ षधि लिनेको संख्या २१२ छ । उच्च रक्त चापका ७८, म’धुमेहका ७२, पाय’ल्सका १८, बा’थरोगका १५, था’इराइडका १० जना बिरामी छन् ।यस्तै मुटुरोगका छ, मा’नसिक रोगका पाँच, ए’चआ’इ’भीका तीन, क्षारे र क्षयरोगीका दुई–दुई, कु’ष्ठरोगी एक जना छन् । विषेशज्ञबाट सुझाव दिएका औषधि सहजरूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ ।
“बिरामी धेरै भए पनि जटि’ल अवस्थाका कम छन्”, प्रमुख काफ्लेले भने, “बिरामीलाई छुट्टै ब्लकमा राखेका छौँ, नियमित जाँच तथा उपचारको सुविधा दिएका छौँ ।”
पछिल्लो समय जिल्लामा सं’क्रमितको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको देखिएपछि भरतपुर का’रागार सबैभन्दा बढी जो’खिम क्षे’त्र बनेको छ । हाल का’रागारमा कै’दी तथा थुनु वा गरी ६८० जना छन् ।